माेरङमा आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्दै, किन गर्छन मान्छेहरु आत्महत्या ? - pnpkhabar.com
You are at:Home»समाचार»माेरङमा आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्दै, किन गर्छन मान्छेहरु आत्महत्या ?
By शर्मिला गुरुङ on २५ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार १०:११ समाचार
रंगेली, माेरङ, २५ फागुन : माेरङककाे रंगेली नगरपालिका ९ स्थित रंन्जनीमा बिहीबार राति अाफुले लगाएकाे गमछाकाे पासाे लगाई एक युवाले अात्मा हत्या गरेका छन । साेही स्थान बस्ने बर्ष १८ का चन्द्र बहादु कटुवालले अाफ्नाे घरकाे घरिनमा गमछाकाे पासाे लगाई अात्मा हत्या गरेको रंगेली प्रहरीले जनाएको छ ।
२ महिना भित्र माेरङकाे रंगेली अास्पासकाे क्षेत्रबाट आत्महत्या गर्नेको संख्या समेत बढेकाे छ। गरिवी, बेरोजगारी, उदासिनता,सम्बन्धमा आईपर्ने प्रतिकुल अवस्था तथा मानसिक समस्या नै आत्महत्याको मुख्य कारण हुन सक्ने प्रहरी काे अनुसन्धान मा देखिएकाे छ । जस मध्य दुई महिनाको अवधिमा ६ पुरुष र ४ महिलाले अात्माहत्या गरिसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।